अस्ट्रेलियाको धुवाँले चाँडै पृथ्वीको चक्कर पूरा गर्ने ! - Lokpath Lokpath
२०७६, २९ पुष मंगलवार १६:१६
अस्ट्रेलियाको धुवाँले चाँडै पृथ्वीको चक्कर पूरा गर्ने !
प्रकाशित मिति : २०७६, २९ पुष मंगलवार १६:१६
काठमाडौं । नासाका अनुसार अस्ट्रेलियाको भयङ्कर डढेलोको धुवाँले चाँडै पृथ्वीको एक चक्कर पूरा गरेर पुुनः अस्ट्रेलिया पुग्न लागेको छ ।
अस्ट्रेलियाको पूर्वी तटीय क्षेत्रभरी महिनौँदेखि जारी डढेलोले भीषण रूप लिँदा त्यसको धुवाँ प्रशान्त महासागरको आकास हुँदै अघि बढेको थियो ।
नासाका अनुसार अस्ट्रेलियाबाट निस्किएको धुवाँ दक्षिण अमेरिकाको आकासमा पुगिसकेको छ जसले गर्दा त्यस क्षेत्रको आकास अहिले कुहिरीमण्डल छ । नासाका अनुसार जनवरी ८ भित्रै धुवाँ पृथ्वीको आधा भाग पुगिसकेको थियो ।
‘अस्ट्रेलियाको धुवाँले विश्वको कम्तीमा एक चक्कर लगाउने आँकलन छ,’ अमेरिकाको सरकारी अन्तरिक्ष एजेन्सीले बतायो । अस्ट्रेलियाका डढेलोमा हालसम्म २८ व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको छ भने २ हजारभन्दा बढी घर नष्ट भएका छन् । विज्ञका अनुसार जलवायु परिवर्तनका कारण डढेलोको स्तर र तीव्रता बढेको छ ।
नासाका अनुसार पछिल्लो डढेलोको ज्वाला यति ठूलो थियो कि त्यसको ‘असाधारण ठूलो’ ज्वालाले मेघयुक्त आँधी सिर्जित गरायो ।
यसले धुवाँलाई वायुमण्डलको माथिल्लो भाग ‘स्ट्राटोस्फेयर’ सम्म पुर्‍यायो । केही त १७.७ किमिको उचाइसम्म माथि पुगेको थियो ।
नासाका अनुसार ‘स्ट्राटोस्फेयर पुगेका धुवाँ हजारौँ किमि टाढासम्म यात्रा गर्न सक्छन् । यसले विश्वभरको वायुमण्डलीय अवस्थालाई असर पुर्‍याउन सक्छ’ ।
नासा अहिले त्यस उचाइमा पुगेको धुवाँले ‘वायुमण्डलमा पुर्‍याउने ठण्डा वा न्यायो असरबारे निश्चित गर्न’ अध्ययन गरिरहेको छ । अस्ट्रेलियाको पूर्वी क्षेत्रमा अझै पनि सयभन्दा धेरै स्थानमा डढेलो लागिरहेको छ । तथापि पछिल्लो केही दिनमा बढेको चिसो र वर्षाको पूर्वानुमानमाझ अग्नि नियन्त्रणको प्रयासमा आशा बढेको छ ।
नासाका अनुसार ती डढेलोहरू यति विशाल छन् कि तिनले अस्वाभाविक रूपमा धेरै आगोका कारण हुने आँधीबेहरी ल्याएका छन् । त्यसको कारण धुवाँ आकाशको धेरै नै माथि पुगेको छ । धुवाँ १७.७ किलोमिटर माथिसम्म पुगेको नासाको तथ्याङ्क छ । त्यति माथि पुगेको धुवाँ संसारभरको आकाशको अवस्थालाई प्रभावित पार्दै पृथ्वी घुम्न सक्छ, नासाले भनेको छ । नासाले त्यो उचाइको धुवाँले आकाशलाई चिस्याउने वा तताउने सम्बन्धमा अध्ययन गरिरहेको बताएको छ।
काठमाडौं । बलिउड महानायक अमिताभ बच्चनका छोरा अभिनेता अभिषेक बच्चनलाई पनि कोरोना संक्रमण
काठमाडौं । बलिउडका महानायक अमिताभ बच्चनलाई कोरोना संक्रमण देखिएको छ । कोरोना संक्रमण
काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिकामा हालसम्म सबैभन्दा बढी कोरोना संक्रमणको असर देखिएको छ